Ch 28 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 28 Matthew
28:1 Ary tamin'ny marainan'ny andro Sabata, rehefa nanomboka nitombo fahazavana amin'ny Sabata voalohany, Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray nandeha nijery ny fasana.
28:2 Ary indro, ny horohoron-tany lehibe. Fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra, ary raha nanatona, dia nanakodia ny vato ka nipetraka teo amboniny.
28:3 Ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra, ary ny vestment dia tahaka ny oram-panala.
28:4 Avy eo, noho ny tahotra azy, Natahotra ny mpiambina, ka tonga tahaka ny maty.
28:5 Ary ilay anjely namaly nanao tamin'ny vehivavy: "Aza matahotra. Fa fantatro fa ianao no hitady an'i Jesosy, Ilay nohomboana tamin'ny hazofijaliana.
28:6 Tsy ato. Fa efa nitsangana, araka izay nanao hoe:. Avia, ka jereo, fa tao no Tompo napetraka.
28:7 Ary avy eo, mandehana faingana,, ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana. Ary indro, dia hialoha anareo ho any Galilia. Any no hahitanareo Azy. The, Efa voalazako aminareo rahateo izany. "
28:8 Dia niala tao am-pasana haingana, sady natahotra no faly indrindra amin'ny, mihazakazaka ny hanambara azy io tamin'ny mpianany.
28:9 Ary indro, Jesosy nifanena taminy, nanao hoe:, "Arahaba." Anefa izy ireo nanatona, dia nihazona ny tongony, dia niankohoka izy.
28:10 Dia hoy i Jesoa taminy: "Aza matahotra. Mandehana, hanambara izany amin'ny rahalahiko aho, mba hankany Galilia. Any no hahitany ahy. "
28:11 Ary nony efa lasa nandeha, indro, ny sasany amin'ireo mpiambina nankany an-tanàna, ary dia nilaza tamin'ny mpitarika ny mpisorona izay rehetra efa nanjo.
28:12 Ary ny fiaraha-mivory amin'ny anti-panahy, nony niara-nihevitra, be dia be ireny dia nanome ny vola be ny miaramila,
28:13 nanao hoe:: "Lazao: Ny mpianany no tonga alina ka nangalatra Azy, raha mbola natory izahay.
28:14 Ary raha ny Procureur mandre momba izany, izahay dia hampanaiky azy, ary hiaro anao. "
28:15 Avy eo, rehefa nanaiky ny vola, Dia nanao araka ny teny nomeny. Ary izao teny izao dia niparitaka teo anivon 'ny Jiosy, mandraka androany.
28:16 Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo nankany amin'ny tany Galilia, ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany azy.
28:17 Ary, rehefa nahita azy, izy ireo nitsaoka Azy, fa ny sasany niahanahana.
28:18 Ary Jesosy, manakaiky, niteny taminy, nanao hoe:: "Ny fahefana rehetra Efa nomena ahy ny any an-danitra sy eto an-tany.
28:19 Noho izany, handeha sy mpianatra ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina,
28:20 sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo hatramin'izay. Ary indro, Izaho momba anareo mandrakariva, Fa na dia hatramin'ny consummation tontolo izao. "